AHOANA NY FIJERENA AN'I INSTAGRAM - INSTAGRAM - 2019
Ahoana no hijerena ny sarinao amin'ny Instagram
Ny kilalao Odnoklassniki dia fampiharana interactive izay mampiasa ny votoatin'ny media isan-karazany. Fa indraindray dia mety tsy haverina na tsy mety izany, izay miteraka korontana eo amin'ny lalao.
Ny antony lehibe mahatonga ny olana amin'ny lalao
Raha tsy milalao ny lalao ao Odnoklassniki ianao, dia mety ny olana eo aminao no olana. Indraindray dia mety ho eo akaikin'ireo mpandrindra ny lalao izy na noho ny tsy fahombiazan'ny Odnoklassniki. Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy miandry ianao mandra-pahatongan'ny fanapahan-kevitra. Raha ny mahazatra, raha liana amin'ny entany ny orinasa iray, dia vahaolana haingana ny olana.
Ankoatra izany, afaka mampiasa ireto toro-hevitra ireto ianao, izay afaka manampy amin'ny famerenana ilay fangatahana tianao:
Ampitao ny pejy fanalahidy miaraka amin'ny fanalahidy. F5 na mametaka ny bokotra eo amin'ny adiresy;
Andramo ny manokatra ny fampiharana amin'ny tranokala hafa.
Antony 1: Fifandraisana amin'ny Internet tsy mety
Ity no antony tena mahazatra sy mahavariana, izay tsy misakana ny fandefasana ny lalao ao Odnoklassniki ihany, fa koa singa hafa amin'ny tranonkala. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny mpampiasa dia afaka miandry fotsiny ny fifandraisana amin'ny Internet mba hiorina.
Jereo koa: Tolotra amin'ny aterineto hanamarinana ny hafainganam-pandehan'ny Internet
Azonao atao ihany koa ny mampiasa toro-hevitra vitsivitsy mba hanatsarana ny hafainganam-pandehan'ny rindrambaiko web:
Raha manana tabilao maromaro misokatra ao amin'ny tranonkalanao ianao ankoatra an'i Odnoklassniki, dia fenoy azy ireo, satria mandany ihany koa ny habetsaky ny fifamoivoizana amin'ny aterineto, na dia 100% aza ny entana;
Ilaina ny mitadidy fa rehefa maka zavatra amin'ny alàlan'ny tracker tracker sy / na navigateur, ny Internet dia mihisatra be, satria ny loharanon-kevitra lehibe dia alefa atomboka. Amin'ity tranga ity dia manolo-kevitra ny hampiato ny famandrihana na miandry azy hamita;
Toy izany koa, miaraka amin'ny rindrambaiko vaovao. Ny fandaharana sasany dia afaka mandefa dikan-teny vaovao eo amin'ny fototra. Mba hahalalanao raha misy ny rindrambaiko dia havaozina, jereo ny "Taskbar" na ny fitoeran-javatra. Raha misy fanavaozana, dia ilaina ny miandry ny famaranana azy;
Andramo ny hampandeha ilay asa "Turbo", izay omena ao amin'ny navigateur maina, saingy tsy miasa foana amin'ny lalao izany.
Jereo koa: Ahoana no ahafahana miditra "Turbo" ao amin'ny Yandex Browser, Google Chrome, Opera.
Antony 2: Nafenina ny Cache Browser
Arakaraky ny fampiasanao ny navigateur no ahafahana manangona karazana fako isan-karazany amin'ny endrika cache. Raha be loatra, ny fahitsian'ny asa amin'ny toerana sy ny fampiharana sasany dia mety hijaly be. Soa ihany fa mora foana ny manadio "Tantara" fitsidihana.
Aza adino izany fa amin'ny alàlan'ny navigateur rehetra "Tantara" nodiovina tamin'ny fomba maro. Ny torolalana ho an'ny Google Chrome sy Yandex Browser dia toy izao manaraka izao:
Antsoy ny varavarankely "Tantara"amin'ny fampiasana ny famintinana Ctrl + H. Raha tsy mandeha izy dia sokafy ny menus navigateur amin'ny fampiasana ny bokotra amin'ny endriky ny bara telo eo amin'ny farany ambony ny varavarankely. Ao amin'ny menio, mifidiana "Tantara".
Ao amin'ny pejy "Tantara" Misy rohy ny rohy "Tantara mazava". Eo an-tampony, ankavia, na ankavanana (arakaraka ny browser).
Ao amin'ny varavarankelin'ny fanadiovana, tsidiho ireo zavatra ireo - "Jereo ny tantara", "Tantara tantara", "Rakitra voafehy", "Cookies sy ireo tranonkala sy ireo tranokala hafa" ary "Data Data". Ankoatra ireo zavatra ireo dia afaka manisy marika fanampiny bebe kokoa amin'ny fahamendrehanao ianao.
Click on "Tantara mazava" rehefa avy nijery ny zavatra ilaina rehetra.
Hamaky sy manokatra ny tranokala. Andramo ny manomboka ny lalao / fampiharana.
Vakio bebe kokoa: Ahoana ny fanesorana ny cache ao amin'ny Opera, Yandex Browser, Google Chrome, Mozilla Firefox.
Antony 3: Nanafika Flash Player Version
Ny teknolojia flash dia mihamitombo tsikelikely, saingy ao Odnoklassniki ny ankamaroan'ny votoatiny (indrindra ny lalao / fampiharana ary "Gifts") dia tsy afaka miasa raha tsy misy Flash Player install. Amin'izay fotoana izay koa, raha te-hanitsy tsara dia mila ny andiany farany indrindra amin'ity mpilalao ity ianao.
Eto ianao dia afaka mianatra ny fomba fametrahana Adobe Flash Player na manavao izany.
Antony 4: Fako amin'ny ordinatera
Noho ny fako ao amin'ny ordinatera, ny lalao sy ny fampiharana amin'ny Internet ao Odnoklassniki dia mety hanomboka tsy hahomby. Ny rafitra fiara Windows dia manana ny fananana tahirin-tsarimihetsika tsy ilaina, izay hikorontana tanteraka ny efitri-drakitra.
Ny CCleaner no iray amin'ireo programa malaza sy azo itokisana indrindra amin'ny fanadiovana ny ordinateranao amin'ny alàlan'ny valanaretina sy ny fahadisoana samihafa. Amin'ny alalan'ny ohatra nasehony dia heverina ho toy ny dingana manaraka ny fampianarana:
Hanombohana, sokafy ny fizarana "Cleaning"eo amin'ny ilany havia.
Tandremo ny tabilao "Windows". Amin'ny ankapobeny dia efa misokatra amin'ny alàlan'ny default izany ary ny toerana rehetra misy azy dia arotsaka araka izay ilaina, saingy afaka manova ny fandaharam-potoanany ianao. Ny mpampiasa tsy manana traikefa dia tsy soso-kevitra ny hanova zavatra ao anatin'ireo fanovana ireo.
Mba hahitana ny fandaharana fandraketana rakitra fako hamafàna, ampiasao ny bokotra "Analysis".
Raha vao vita ny fikarohana dia lasa mavitrika ny bokotra. "Cleaning". Ampiasao izany.
Ny dingana fanadiovana dia maharitra hatramin'ny minitra maromaro. Rehefa vita izany dia azonao atao ihany koa ny mampihatra io fampianarana io amin'ny dingana faharoa, saingy amin'ny tabilao ihany "Applications".
Indraindray noho ny olana ao amin'ny rejisitra, ny lalao sasany ao Odnoklassniki dia mety tsy mety tsara na tsia. Azonao atao ihany koa ny manazava ny lisitry ny fahadisoana mampiasa CCleaner:
Taorian'ny nanokafana ny fitaovana, dia mandehana "Registry". Ny kilaometatra tadiavina dia hita eo amin'ny ilany havia amin'ny efijery.
Amin'ny alàlan'ny fitsipika, eo ambanin'ny lohateny Registry Integrity Hodinihina daholo ny zavatra rehetra. Raha tsy eo izy ireo, dia ataovy izany.
Aorian'io, manomboka mitady fikarohana. Ampiasao ilay bokotra "Fikarohana olana"izay hita any amin'ny faran'ny efijery.
Miandrasa mandra-pahatapitry ny fikarohana ny fahadisoana, dia jereo ny fanamarinana raha napetraka mifanohitra amin'ny fahadisoana hitany. Raha ampiasaina tsara ny zava-drehetra, ampiasao ny bokotra. "Correct".
Ny varavarankely iray dia hiseho eo amin'ny toerana hangatahana anao hamerina ny lisitry ny rejisitra. Miangavy ny hanaiky izany, saingy azonao atao ary mandà.
Raha vao vita ny fanitsiana ny fanitsiana ny fahadisoana dia manokatra ny Odnoklassniki ary manomboka ny lalao problem.
Antony 5: Virosy
Ny virosy eo amin'ny solosaina dia mety hanimba ny asan'ny fampiharana sasany ao Odnoklassniki. Amin'ny ankapobeny, ireo virosy ireo dia spyware sy adware isan-karazany. Manaraka anao ary mandefa vaovao amin'ny antoko fahatelo, mandany an'io fifamoivoizana amin'ny aterineto io. Manampy dokam-barotra isan-karazany ao amin'ny tranokala i Vtory, izay misakana ny fandefasana azy tsara.
Eritrereto ny manadio ny ordinateranao amin'ny malware amin'ny fampiasana ohatra an'ny Defender Windows:
Azonao atao ny manomboka mpiady Windows amin'ny fikarohana hita ao "Taskbar" ao amin'ny Windows 10. ampiasao "Control Panel".
Raha efa nahita ny viriosy ny mpitsikilo, dia hitodika amin'ny orange ny interface ary hipoitra ny bokotra "Cleanadio". Ampiasao izany mba hanesorana ny viriosy manontolo amin'ny solosaina. Rehefa tsy hita na aiza na aiza, ity bokotra ity dia tsy hisy, ary dia hitodika ny interface.
Na dia misy fanesorana virus aza, amin'ny fampiasana ny torolàlana avy amin'ny fehintsoratra teo aloha, dia alefaso ny fanaraha-maso tanteraka ny ordinatera, satria misy ny lozam-pifamoivoizana tsy navoaka nandritra ny fanandramana teo aloha. Mariho ny sakana eo ankavanana miaraka amin'ny lohateny. "Safidy Validoana". Hifantina ny boaty "Full" ary tsindrio ny bokotra "Andramo izao".
Haharitra ora maromaro ny fanamarinana. Rehefa vita izany dia manokatra varavarankely manokana, izay ahafahanao manala ireo viriivina rehetra fantatrao amin'ny fampiasana ny bokon'io anarana io.
Antony 6: Antivirus Settings
Ny fampiharana sasany sy ny lalao ao Odnoklassniki dia mety manahy ny fandaharana virtoaly avo lenta, izay mitarika ho amin'ny fanakanana ny sehatra. Raha toa ianao 100% azo antoka amin'ny lalao / fampiharana, azonao ampiana izany "Ankoatra" ao amin'ny Antivirus anao.
Matetika ao "Ankoatra" Ampy hametrahana ny habaka Odnoklassniki ihany koa ny fandaharana ary hijanona mangina ny fanakanana ny zava-drehetra mifandraika amin'izany. Saingy misy ireo toe-javatra izay ilainao mamaritra rohy mankany amin'ny fampiharana manokana.
Maro ny antony mahatonga ny fampiharana sy ny lalao handa tsy hiasa amin'ny Odnoklassniki, saingy amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'izy ireo dia afaka mora ampiasain'ny mpampiasa. Raha toa ka tsy nanampy anao ny torolàlana, dia andraso kely, angamba ny fampiharana dia hiverina haingana indray.